PSG oo wadahadal la bilowday Paulo Dybala – Maanta Online
PSG oo wadahadal la bilowday Paulo Dybala
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warasmayaa inay wadahadalo la bilaabi doonto Juventus si ay heshiis 73 milyan ginni ah kala soo wareegaan Paulo Dybala isbuucaan.
Weeraryahanka reer Argentine ayaa loo sheegay inuu xor u yahay inuu ka tago Juventus xagaagaan, laakiin wadahadaladii u dhaxeeyay Manchester United iyo Tottenham Hotspur ayaa burburay horaantii bishaan sabab la xiriiray mushaharka uu dalbaday iyo arrimaha ku saabsan xuquuqdiisa muuqaalka.
Inter Milan ayaa sidoo kale lala xiriirinaayey Dybala, oo ay macquul tahay inay qeyb ka dhigto heshiiska Mauro Icardi ugu wareegayo Juventus, inkasta oo 25-jirkan uu door bidaayo inuu sii joogo Turin.
PSG waa hal koox oo Dybala ka fiirsaneysa inay iibsato, Daily Mail ayaa sheegeysa in agaasimaha isboortiga kooxdan Leonardo uu wadahadalo la furi doono wakiilka weeraryahanka Jorge Anton isbuucaan.
Kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ayaa la fahamsan yahay inay riixeyso heshiis lagu dhameystirayo saxiixaan ilaa iyo arbacada ka dib guuldaradii lama filaanka aheyd ee axadii ka soo gaartay kooxda Rennes.
Sikastaba, Juventus ayaa loo maleynayaa inay ku doonayso Dybala lacag dhan 100 milyan oo euro laakiin PSG ayaa ku dooneysa qiimaha intaa ka yar.
← Wafdi ka socda Qatar oo soo gaaray Muqdisho lana kulmay RW Kheyre (Sawirro)
Wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo caawa ka taagan Kismaayo →
Kooxda Arsenal oo u baqeysa amniga qaar ka mid ah Ciyaartoydeeda